द्वारा पोस्ट गरिएको Tranquillus | मई 8, 2018 | व्यावसायिक विकास
मालिक, प्रबन्धक र कहिलेकाँही सहयोगीहरू काममा विषाक्त जलवायुको स्थापनामा भाग लिन सक्छन्।
काममा तपाईंको भलाइलाई हानिकारक गर्ने व्यक्तिलाई कसरी पहिचान गर्ने र विशेष गरी कसरी छुटकारा प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई पहिचान गर्ने, यहाँ हाम्रो सुझावहरू।
अंतर जान्नको लागी:
काममा विषाक्त जलवायुबाट निकाल्नको लागि हामीले हामिलाई जिम्मेवार व्यक्तिको पहिचान गर्नु पर्छ।
र यो कदम यति सजिलो छैन, किनकि यो मान्छे साँच्चै जहर भएका व्यक्तिहरूबाट कष्टप्रदलाई अलग गर्न आवश्यक छ।
त्यसैले यहाँ5प्रकारका विषाक्त व्यक्तिहरू छन् जुन काममा टाढाबाट टाढा हुन्छन्।
को egocentric : दूर र ठंड, उदाहरणीय मान्छे निराशाजनक छन्। तिनीहरू अरूलाई आत्म-सम्मान बढाउन मात्र उपकरणहरूको रूपमा हेर्छन्।
दरबार वा गफ: कुराकानीले आफ्नो शक्ति अरूको दुर्भाग्यबाट लिन्छ र केवल आफ्ना सहकर्मीहरूको पेशागत वा व्यक्तिगत जीवनको कमजोरीहरूमा मात्र रूचि राख्छ।
विपरित : एक विरूद्ध आफ्नो खराब इरादे द्वारा मान्यता प्राप्त छ, उनको लक्ष्य: एक निश्चित खुशी को खोज गर्न लाई नोकसान गर्न। तपाइँ सजिलै यसलाई पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसैले यसलाई तुरुन्तै हटाउनुहोस्।
क्यारेक्टर सहयोगीहरू : उनीहरूले उनीहरूको भावनालाई नियन्त्रणमा राखेनन् र सोच्नका लागि कि तिनीहरू उनीहरूको रगतको लागि जिम्मेवार छन्। छुटकारा पाउन कठिन छ, किनकि क्यारेक्टरहरू हाम्रो भावनाहरूसँग खेल्छन् र हामीलाई दोषी महसुस गर्छन्।
घमण्डी मान्छे यी मानिसहरू हुन् जुन प्रायः काममा ठूलो समस्या छन्। तिनीहरू झूटो आत्म-विश्वास पछि लुकाउँछन्, जुन वास्तवमा एकदम ठिकै संदेह प्रकट गर्दछ।
काम मा एक विषैले जलवायु देखि बाहिर जान्छ?
काममा विषाक्त जलवायुबाट बचाउन, पहिलो गल्ती गर्न प्रतिबद्ध छैन कि उनीहरूको खेलमा पुग्न हो।
वास्तवमा, तिनीहरूका व्यवहारले तर्क लगाउँछ, यो तर्कहीन छ, त्यसैले यो तिनीहरूलाई जवाफ दिन चाहान बेकार छ।
रिड सफल कौशल मूल्याङ्कनका लागि7युक्तिहरू
त्यसकारण यस नकारात्मक मूडबाट बाहिर जानुहोस् यो सतर्क हुँदा बाहिरिनु आवश्यक छ, किनकि कसैले तिनीहरूलाई बचाउन उत्तम तरिका छनौट गर्न विषैले व्यवहारलाई चिन्न पर्छ।
हामी अक्सर सोच्दछौं कि हामी विषाक्त व्यक्तिसँग काम गर्छौं किनभने यो भाग्न असम्भव छ।
एकपटक विषाक्त व्यक्ति पहिचान भएको बेला, उनको व्यवहार भविष्यवाणी हुनसक्छ र यसैले सजिलै बुझ्न सजिलो हुन्छ।
यसले हामीलाई उनीहरूलाई समर्थन गर्नुपर्छ र जब हामीले छैन जब तर्कसंगत सोच्न अनुमति दिन्छ।
तपाईं यो सक्रिय रूपमा गर्छ र लामो समय सम्म राख्नुहोस् जबसम्म सीमा सेट गर्न सम्भव छ।
यो महत्त्वपूर्ण छ त्यसो गर्न अनुमति छैन, यसले जटिल परिस्थितिहरूमा भइरहेको छ।
सीमाहरू सेट गरेर, हामी निर्णय गर्न सक्छौं जब र कसरी विषाक्त व्यक्ति व्यवस्थापन गरिन्छ।
यो एक जहरीली जलवायु बाहिर पुग्न सजिलो हुन्छ।
सबै भन्दा कठिन चीज एक स्थानमा बस्न र आफ्नो सीमा राख्न जब व्यक्तिले तिनीहरूलाई अन्त्य गर्न खोज्छ, जुन तिनीहरू सधैं गर्छन।
विषाक्त काम वातावरण: कसरी बाहिर जान्छ? अगस्ट 19th, 2018Tranquillus
अघिल्लोखुल्ला ठाउँमा प्रभावकारी कार्य कसरी गर्ने?
निम्नकाममा आफैलाई आत्महत्या गर्न कसरी सफल हुन्छ?